July | 2021 | HimiloNetwork
Masjid goob qashin ka dhiganaya garoon carruurtu ugu cayaaraan!
Himilo July 29, 2021	Leave a comment 138 Views
MUQDISHO (HN) — Xubno katirsan Jamaacada Masjidka Birmingham ayaa ku guuleystay inay goob qashinka la isaga tuuro ay ka dhigaan garoon kubadda cagta ay ku cayaaraan da’yarta Muslimiinta. Shahid Tameez, oo ah Imaamka Zia Ul Ummah Center ayaa sheegay in masjidka gadaashiisa ay ku arkeen qashin badan – iyaga oo sidoo kale isla markaana dareensanaa in carruurta yaryari u baahan ...
Himilo July 29, 2021	Leave a comment 164 Views
MUQDISHO (HN) — Marada madow ee Kacbada oo la yiraahdo Kiswa ayaa la beddelay waxaana la saaray mid kale oo cusub maalintii Carafada ay ku beegneyd ee 9-ka bisha, waxaana tolmadeeda iska kaashaday 200 oo khubaro ah oo ka howlgala xarunta Dar-ul-Kiswa. Adduun dhan 20 milyan oo Saudi riyal ah ayaa ku baxay sameynteeda, marka loo eego dhambaal-sidaha Khaleej Times. ...
La kulan; Ninka 22 sano ay ku qaadatay inuu kaga baxo Dugsiga hoose.
Himilo July 27, 2021	Leave a comment 135 Views
MUQDISHO (HN) — Nin KENYAN ah ayaa muddo 20 sano ah ay ku qaadatay inuu kaga baxo dugsiga hoose ayaa ugu dambeyntii ka qalin-jebiyay Jaamacadda. Isaga oo la hadlaya warfidiyeenka, Mathew Aol Nyamlori, oo ah 38 jir, ayaa shaaca ka qaaday inuu heerka koowaad ee Jaamacadda kaga baxay kulliyadda adabka – qeybta siyaasadda dadweynaha ee Jaamacadda Kenyatta University. Wuxuu ku ...
Himilo July 22, 2021	Leave a comment 200 Views
MUQDISHO (HN) — Ragga la nool Waraabaha waa koox duurka kasoo qafaasha Dhurwaayada si ay dadka ugu madadaaliyaan. Qashin-qub aanu dhab ugu noolaan Karin insaanka ayay ku ilaaliyaan noolahan miciyaleyda kamid ah. Gafuurxir loogu tala-galay in la iskaga ilaaliyo si gaadmo leh inuu afka kuula helo ayaa ah kahortagga ugu weyn ee xaggiisa laga sameeyey. Waxaa taas barbarsocda dhaqashada iyo ...
App lagu dalban karo adeegga Udxiyadda oo lasoo saaray
Himilo July 19, 2021	Leave a comment 132 Views
MUQDISHO (HN) — Sannad kasta, Muslimiin badan ayaa safka dheer u gala goobaha lagu qalo xoolaha si ay Ilaahay ugu hibeeyaan qurbaankooda inta lagu jiro saddexda maalmood ee Ciiddul Adxa. Laakiin sannadahan Muslimiintu waxay baadigoobayaan hab sahlan kana fudud sidii hore oo ay adeegaas ku qabsan karaan si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka Covid-19. Gudaha magaalada Dubai si kastaba, waxaa ka ...
Himilo July 19, 2021	Leave a comment 144 Views
MUQDISHO (HN) — Carruurnimadiisa laga soo bilaabo wuxuu aad u jeclaa bir-socotada oo dhan oo baabuurtuna ay kaga jireen kaalmaha hore. Waxayna taasi kaga tagtay inuu is weydiiyo sabbata gaari walba dibadda loogu sameeyo oo aan gudaha mid lagu sameeyey loo arki Karin. Wuxuu sameeyey wax walba oo ay ku qaadan kartay si uu aragtidaas mar un u hirgaliyo. Waana ...
Himilo July 18, 2021	Leave a comment 1,277 Views
MUQDISHO (HN) — Hooyo 73 jir ah ayaa ku biirtay koox haween ah oo ku jiray barashada sida loo wado baaskiilka oo ay ku doonayaan inay ku dhisaan kalsoonida iyo helidda jir caafimaad leh oo iska difaaca xanuunka faafaya ee Covid-19. “Aniga oo yar ayaan ku dheeli jiray baaskiilka walaalkey gudaha dalka Pakistan, waxaana dareemay inaan dhammeystiro riyadaydaas ahayd inaan ...
Fadliga Soonka Maalinta Carafo.
Himilo July 18, 2021	Leave a comment 237 Views
MUQDISHO (HN) — Bisha Soonqaad waxay dad badan u tahay bishii Soonka, sadaqada iyo sameynta acmaasha wanwanaagsan oo idil. Dad badan waxay uga dhigan tahay midda kaliya oo ay sugaalkeeda iyo ka fara-qabsiga ajarkeeda lagu fara-adeygo. Waana midda ka dhigaysa tan loogu tirsi iyo majeersi badan yahay billaha kale ee Muslimiinta. Bisha Carafo oo ah bil kale oo Muslimiinta dunida ...
Feeryahan Khabib: “Ilmahayga inay Muslim noqdaan ayaan jeclahay.”
Himilo July 15, 2021	Leave a comment 134 Views
MUQDISHO (HN) — Feeryahanka Muslimka ah ee Khabib Nurmagomedov ayaa sheegay inuu doonayo carruurtiisa inay noqdaan Muslimiin diintooda si fiican ugu dhaqma. Isaga oo ka hadlaya madal la iskugu yimid ayuu yiri; “Waxaan doonayaa ilmahayga inay noqdaan Muslim diintiisa ku dhagan.” “Mana ahan inay kasoo jeedaan qowmiyad Muslim ah ama waalidkooda ay yihiin, balse inay noqdaan Mu’miniin Ilaahay caabuda. Waa ...
Himilo July 15, 2021	Leave a comment 126 Views
MUQDISHO (HN) — Laacibka Muslimka ah ee kooxda Liverpool, Sadio Mané ayaa ku yaboohay adduun dhan $693,000 (£500,000) dhismaha Isbitaal laga dhisayo magaaladii uu kusoo koray ee Bambali, oo 400 km u jirta caasimadda Dakar ee dalka Senegal. Horay uma lahayn isbitaal degmadiisu, sida ay laga soo xigtay CNN. Mane ayaana la kulmay madaxweynaha waddanka, Macky Sall si uu kala hadlo xaaladda ...
Mandheera: gabar umushay xilli ay ku jirtay imtixaan
Ardayda Muslimiinta Atlantic City oo dugsiyada ka helaya ‘cunnooyin xalaal ah’.